Galmada ayuu ka yareeyay Eeg waxa ay ku sameysay | shumis.net
Home » galmada » Galmada ayuu ka yareeyay Eeg waxa ay ku sameysay
Galmada ayuu ka yareeyay Eeg waxa ay ku sameysay
Nin ayaa jiray oo naagtiisa ay isku ficnaayeen, ninkii wuxuu ku mashquulay ganacsi, maalin kasta guriga wuxuu ka baxaa isagoo degdegsan, wuxuu yareeyay galmada xaaskiisa, sida la ogyahay haweenka badankooda galmada aad bay uga helaan laakin way ka xishoodaan.
Naagtii marka ay u sabri weysay iyadana waxay bilowday jooko kale taas oo dhan guriga shaqdiisa ayay faraha kala baxday waayo ninka ayay rabtaa inay wax fahansiiso si toosna uguma sheegin kacsigeeda iyo wasmo inay u baahan tahay.
Ninkii marka uu guriga ku soo laabay wuxuu dareemay aqalkii oo kala daadsan wax uu qabto ayuu kasi waayay, ma fahmin sirta isagana wuxuu bilaabay inuu naagtii ciriiriyo oo uu biilkii ka yareeyo wuxuu usii gudbay inuu banaanka ka cunteeyo guriga jiif keliya ayuu u imaanayay, markii sheekada ay dheeraatay wuxuu qoray warqad wuxuu ku qoray hadalkan ” Shaqadaada qabso dantaada waad helaysaa” wuxuu ku dhejiyay jikada wuu iska tagay.
Subaxdii marka ay haweeneydiisa hurdada ka soo toostay waxay gashay kushiinka waxay ku aragtay warqadda inta ay soo qaadday ayay sariirta ugu dhegisay, ninkeeda markuu ka soo laabatay camalka oo uu galay qolka jiifka wuxuu sariirta ku arkay warqaddii isaga qoray oo uu kushiinka dhigay, wuu fahmay xaaskiisa inay u baahnayd galmo meesha ayuu ka bilaabay in uu si fiican ula dhaqmo.
Sheekadan waxaa laga fahmayaa ninka iyo xaaskiisa inay muhim tahay raaxada sariirta inay isku fahmaan waayo haweenka qaarkooda lacag way ka sabri karaan laakin wasmada nimankooda habeen iyo maalin ayay u baahan yhihiin naagaha qaarkooda marka ninkooda qancin waayo way siigaystaan.
Sidaas ayay biyaha isaga keenaan, runtii naagta marka ay tahay raaliyad qurux badan aad ayay ninka u qancisaa oo way fahmi kartaa wuxuu ka rabo,sidoo kale wuxuu u noqonayaa macaansiga raaxada cayaartadhaqanka ninka iyo naagtakaas oo kaalin weyn ka qaata.
Title: Galmada ayuu ka yareeyay Eeg waxa ay ku sameysay
Posted by Unknown, Published at July 20, 2016 and have 0 comments